Maxay tahay arrinta beesha caalamku u ballan qaaday ra’iisal wasaare Rooble? - Axadle | Axadle
Muqdisho (RBC) – Ra’iisul wasaaraha Isgaarsiinta, Mudane Maxamed Xuseen Rooble, ayaa dhawaan la kulmay beesha caalamka, oo ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo isbadalada siyaasadeed ee dalka.
Sii hayaha xilka wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya C / raxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa VOA u sheegay in beesha caalamku ay taageersan tahay ra’iisul wasaaraha u qaabilsan doorashada.
Al-Cadaala wuxuu sheegay in beesha caalamka ee ra’iisul wasaaraha siisay fursado looga miro dhalinayo midho dhalinta ay ogolaaneyso wadarta dalka, maadaama uu isagu mas’uul ka yahay waajibaadka dastuuriga ah iyo amniga.
“Kulankii Ra’iisul Wasaaraha uu la qaatay Beesha Caalamka wuxuu ahaa mid lagu taageerayay Beesha Caalamka sidii loo qaban lahaa doorashooyinkii ay sugayeen iyo in la sugo amniga dalka, waxay sameeyeen balanqaadyo wanaagsan waxayna u heelan yihiin qadiyada Ra’iisul Wasaaraha” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha.
Wasiir ku xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in wakiilada beesha caalamka ay balanqaadeen inay ka shaqeyn doonaan doorashada, shir dhowaan dhacay oo 20ka Maarso la isugu keenayo arrimaha khilaafaadka doorashada.
Beesha Caalamka iyo mucaaradka sida weyn uga soo horjeeday muddo kordhinta waxay ku guuldareysteen inay diyaarsadaan waqtiga madaxweynaha tallaabada soo dhaweynta ee hakinta qaraarka Baarlamaanka, dadaalada loogu jiro in taageero xoog leh loo muujiyo keenista dhinacyada heshiiska kuma koobna. muran.
Xiisadaha ka taagan doorashada ayaa bishii la soo dhaafay gaarey halkii ugu sareysay, laakiin tan iyo markii laga noqday muddo kordhintii Farmaajo, waxaa soo dhowaanaya rajadii laga lahaa in heshiis laga gaaro hanaanka doorashada.
Wareysiga Al-Cadaala halkan hoose ka dhageyso